You searched for Korea - Crown Education
Sep 09, 2020 Phone Letyar
Jan 19, 2018 Admin News
ယနေ့ခေတ်မှာ မြန်မာနိုင်ငံက လူငယ်လူရွယ် ကျောင်းသား၊ကျောင်းသူတွေအနေနဲ့ နိုင်ငံရပ်ခြားမှာ သွားရောက် ပညာသင်ယူခြင်းဟာ အထူးအဆန်းမဟုတ်တော့ပါဘူး။နိုုင်ငံရပ်ခြားမှာ ပညာသင်ယူခြင်း ဖြင့် နိုင်ငံတကာနှင့် networkချိတ်ဆက်မိစေခြင်း၊ နိုင်ငံတကာမှ ယဉ်ကျေးမှု ဓလေ့ထုံးတမ်းစဉ်လာများကိုု လေ့လာနိုင်ခြင်း၊ နောင်တစ်ချိန် ကိုုယ်ပိုင်စီးပွားရေးလုပ်မယ့်အခါမှာလည်း မတူညီ ကွဲပြားတဲ့ အတွေးအခေါ်အမြင်သစ်များကို ရရှိစေနိုုင်ခြင်း စတဲ့ အားသာချက်များကြောင့် မြန်မာကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူများ အနေဖြင့် အနီးဆုံး အိမ်နီးချင်းနိုုင်ငံတွေဖြစ်ကြတဲ့ စင်္ကာပူ၊ ထိုင်း၊ မလေးရှား တို့အပြင် အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၊ ...
Feb 18, 2020 Phone Letyar
Feb 11, 2019 Solbridge International School of Business
The BBA program at SolBridge has been designed to prepare our graduates to excel as Asian Thought Leaders. Students specialize in one area of business and minor inaforeign language to ensurea...
SolBridge prepares students to be the Next Generation of Asian Thought Leaders in the fast growing and rapidly changing Asian economy. SolBridge is unique among business schools for several reasons: Located in Korea, all ...
Jun 06, 2018 Hull
Computer Science playsavital role in driving the technological advances that we have come to take for granted. Our degree prepares you for the exciting new challenges within this continually evolving industry. There are ...
Mar 27, 2018 Nottingham Trent University
Our MSc International Business (Single Award) degree is designed to equip you with broad knowledge acrossawide range of international business topics, and to enable you to develop more specialist knowledge as the ...
Mar 14, 2018 Admin News
Nov 28, 2017 George Mason University
The Global Affairs graduate program prepares globally competent professionals to enter today's fast-paced, interconnected world. Usingamultidisciplinary approach, coursework highlights both the theoretical and practical aspects of the cultural, political, and economic dynamics ...